Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari > Intloko yeshawari engaphezulu
Intloko yeshawari engaphezulu Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yolawulo lwekhwalithi ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu imigca yempahla yococeko ibandakanya oku kulandelayo: Intloko yeshawa, intloko yeshawari engaphezulu, Ishawa yesandla, iiseti zikaloliwe zesilayidi, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izixhobo zeshawa, iShower Bidet, Ishawa & nezixhobo zokuhlambela ngokunjalo norhwebo kunye ezinye iimveliso zococeko kwi Made in China Website.
Intloko yeshawari ephezulu yeyona mveliso yethu iphambili. Sineemveliso ezingaphezu kwama-80 kwiimilo ezahlukeneyo ukuze abathengi bakhethe kuzo. Ubomi beshelufu yeemveliso zethu yiminyaka emibini, kodwa ubomi benkonzo bunokufikelela kwiminyaka emi-5-10. Ziyakwazi ukuthengwa ngokwahlukileyo, kwaye zingasetyenziselwa kunye neengalo zeshawa kunye neentsika zokuhlamba. Izinto ezisetyenziswa kuzo zonke izimbo ziiplastiki ezintsha. Ngokuphathelele kunyango olungaphezulu, izitayile zethu zeklasikhi zonke zine-chrome-plated, kodwa ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso, singayenza.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezintsha ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala ukhetho olwahlukileyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Umgangatho ophezulu weemveliso uqinisekiswa bubuchwepheshe obuphambili, izixhobo zanamhlanje, kunye nolawulo lomgangatho kwinqanaba ngalinye lemveliso. Ngombono wethu wolawulo kunye nokukhula okuqhubekayo, intloko yeshawari ephezulu ithengisa kakuhle kwimarike yehlabathi, eye yazuza udumo oluhle kakhulu. Ishishini lethu ligxile kwi-R&D, iOEM, iODM.
Yellow Square Head Shower Head
Yellow square head shower Intloko, inkangeleko ekhethekileyo yenza abantu bakhanye, kwaye indawo yokuphuma kwamanzi emhlophe ihambelana kakuhle kakhulu.
Electroplating square head shower, inkangeleko ekhethekileyo yesikwere, indawo yokuphuma amanzi.
Intloko yeshawari eyiNtloko yeNgxangxasi
Intloko yeshawari yentloko yeengxangxasi yahlukile kwindawo yokuphuma amanzi engqukuva. Ubume obukhethekileyo buyamangalisa. Iphaneli emnyama engwevu iphezulu kakhulu, kwaye ngasemva iseyi-chrome-plated.
Ishawara engaphezulu yokuPlatwa ngaphezulu
Ishawari yokucwenga yangaphezulu yenziwe ngeplastiki entsha ye-ABS, ene-chrome yokucakwa ngasemva.
Ishawari yeplastiki ye-ABS engqukuva yimveliso enamacala amabini e-chrome yokucakwa. Ukukhutshwa kwamanzi kule ntloko yeshawa yenziwe nge-TPR ecacileyo.
Intloko yeshawari enkulu eRound kwintloko
Intloko enkulu engqukuva ishawa Intloko, le mveliso ibonakaliswe ngokubonakala kwayo emhlophe kunye nesilivere yeperile yokuphuma kwamanzi, eneemfuno eziphezulu kakhulu zokubumba, kunye nokuveliswa kweemveliso ezimhlophe kuneemfuno zomgangatho wezinto.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Intloko yeshawari engaphezulu zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Intloko yeshawari engaphezulu uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.